Alcatel Idol 5s, anyị nwalere gị | Gam akporosis
Alcatel Idol 5s, anyị nwalere ya maka gị
N'iji usoro IFA Berlin mee ihe, Alcatel egosila usoro nke ekwentị na ebumnuche doro anya nke ịwakpo etiti. Anyị na-ekwu maka Alcatel A7 na A7 XL ọhụrụ, yana ndị otu ọhụụ nke ezinụlọ Idol, Alcatel Idol 5 na Idol 5s.
Mgbe anyị nyesịrị anyị echiche anyị mgbe anyị nwalechara akara ọhụụ nke ndị nrụpụta ahụ, ugbu a, ọ bụ ntụgharị nke echiche mbụ anyị na Alcatel Idol 5s, ekwentị dị n'etiti nwere ụfọdụ ihe ịtụnanya na-atọ ụtọ.
2 Nka na ụzụ nke Alcatel Idol 5
Na imewe ngalaba anyị na-ahụ a ekwentị na-ekwusi a imewe yiri nnọọ ihe ika ji anyị, ọ bụ ezie na ụfọdụ na-akpali nnọọ ịtụnanya. Ma nke ahụ bụ Alcatel Idol 5s Na otu aka, o nwere ihe aluminom chassis nke na-eme ekwentị nwere adịchaghị risịrị na-kwesiri ngosi na aka.
Ngwaọrụ na-eguzo onwe ya ma na-enye a ezigbo mma aka na aka. Alcatel Idol 5s zuru oke nke ọma, n'agbanyeghị na ọ bụ ekwentị dị n'etiti, ogo ya ga-eme ka ọ bụrụ nhọrọ ị ga-echebara echiche.
Ihe ọzọ dị ịtụnanya na-abịa na ya sọrọ okwu dị na ihu na nke ahụ na-enye mma dị mma karịa ka a tụrụ anya ya. Da adịghị ka mkpọ ma na-atụle na anyị na-ekwu maka ekwentị dị mfe, eziokwu ahụ na ọ dị mma nke ukwuu bụ nkọwa iji banye na akaụntụ.
Nka na ụzụ nke Alcatel Idol 5
Nlereanya AJOL 5s
Ihuenyo 5.2 sentimita asatọ na mkpebi HD zuru ezu
Igwefoto na-aga n'ihu 12 MP - 2LED - f / 2.0 - 1.25 1080pm 30p @ XNUMXfps
Atụmatụ ndị ọzọ akara mkpisiaka ihe mmetụta / accelerometer / gyroscope / Dual ọkà okwu
Batrị 2.850 mAh na usoro ntinye ngwa ngwa
Akụkụ 148 × 73 × 7.5 mm
Ibu ibu 155 gram
Dị nnọọ ka ọkà okwu ya juru m anya, ihuenyo nke Alcatel Idol 5s bụ ike dị ukwuu nke ekwentị. Ogwe ya dị ezigbo mma na-enye ezigbo agba agba ma karie akụkụ nlele ziri ezi nke na-akpọ gị ịnụ ụtọ ọdịnaya ọdịnaya ọtụtụ na ụlọ ọrụ.
Nnyịn imokụt enye a igwefoto na-arụ ọrụ n'ezie ọjọọ. Achọrọ m iche na ekwentị m na-anwale abụghị nkọwa doro anya ma ọ bụ na mgbe ejiri ya mgbe niile na ụdị nke ụdị a jupụta ya, mana nrụrụ ọrụ igwefoto ya juru m anya. Anyị ga-echere ka ha zitere anyị otu iji nyochaa ya nke ọma n'ihi na n'akụkụ ahụ, Alcatel Idol 5s emechuola m ihu, na ọtụtụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » IFA » Alcatel Idol 5s, anyị nwalere ya maka gị
Alcatel IDOL 5, mmetụta mbụ